भाइरल बखत बिष्टकी श्रीमती प्रतिभाको ७ जना ब्वाईफ्रेण्ड ! १९ वटा बच्चा, ठाउँको ठाउँ बखत बेहोस (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/भाइरल बखत बिष्टकी श्रीमती प्रतिभाको ७ जना ब्वाईफ्रेण्ड ! १९ वटा बच्चा, ठाउँको ठाउँ बखत बेहोस (भिडियो सहित)
भाइरल बखत बिष्टकी श्रीमती प्रतिभाको ७ जना ब्वाईफ्रेण्ड ! १९ वटा बच्चा, ठाउँको ठाउँ बखत बेहोस (भिडियो सहित)
भाइरल जोडी बखत बिष्ट र प्रतिभा चौधरीको अन्तर्वार्ताहरु युट्युबमा धेरै भेटिन्छन् । पछिल्लो समय श्रीमति प्रतिभा भन्दा कदमा आधा होचा बखत सामाजिक संजालमा निकै भाईरल हुदै गईरहेका छन् । माया प्रेमको लागि सबै त्याग गरेर काठमाडौं आएका बखत बिष्ट र प्रतिभा चौधरी अरु जोडी भन्दा धेरै फरक छन् । सामाजिक संजालमा धेरै नै रुचाईएका जोडी बखत र प्रतिभासँग आज अरु समय भन्दा पृथक कुराकानी गरिएको छ ।
आज एउटा खेल मार्फत बखत र प्रतिभाको आत्मियताको बारेमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका छौँ । श्रीमती प्रतिभाको ७ जना ब्वाईफ्रेण्ड भनेको सुनेपछि बखत ठाउँको ठाउँ बेहोस नै भए । निकै रमाइलो शैलीमा सोधिएको प्रश्न उत्तर खेलको क्रममा यी जोडीले आफ्नो हाँसो रोक्न सकेनन् । हेरौं बाँकी रमाइलो कुराकानी तलको भिडियोमा :